Vanyori venhoroondo vanotiudza kuti Egypt yaive Negro-Africa budiriro - Afrikhepri Fondation
min kuverenga 3 min
Liye vatema veAfrica (Mapurofesa Cheikh Anta Diop naObenga) akakunda kukunda kukuru kumusangano weCairo muna 1974. Asi European Egyptology inoramba ichinyepedzera Nhoroondo. Liye maGreek nemaLatins, zviono zvevaIjipita vekare, vanogara vachisimbisa kuti vaIjipita ndeve "nhambo". Pakati pezvakawanda zvechipupuriro cheGreek neechiLatin, ngatitaurei izvo zvaHerodotus, Diodorus, Aristotle naHeliodorus:
Herodotus, akatumidzwa kuti baba venhoroondo, wechiGiriki munyori wenhoroondo (480-425 BC), akaenda kuIjipita. Anotiudza kuti vekare veIjipita vaive ne ganda dema (melakroes) nevhudzi rebvudzi (oulotrikhes) (Bhuku II, 104).
Diodorus, panguva Greek wenhoroondo Caesar Augustus (63 14 BC JC-AD) anotiudza kuti ndiye Ethiopia izvo nyuchi Egipita (vaAtene pfungwa: kuwedzera kwevanhu arambe achirema akatungamirirwa kumusangano wokuchamhembe). (Historical Library, Bhuku III, 3,1).
Aristotle, musayendisiti, muzivi, muperekedzi Alexander Mukuru (389-322 BC), vekirasi vaEgipita navaItiopia kare vanhu vane ganda "wo dema" (agan Melanes) (physiognomy, 6)
The Greek Heliodorus anonyora pamusoro Chariclea musikana chena, kuti pamberi vaEgipita: "Zvakare iye achiona dzavo rima ruvara rweganda (The Ethiopic, tome1)
Mune zvinyorwa zvese zvekunyora, izwi rechiito rokuti "kem" rinobva pashoko rakasvibiswa rinoreva "kuita, kukwira kune, kuzoita, kubhadhara kukwana, kushumira asiwo kuva madema". Izwi rokuti kem rinorevawo "zvakakwana, zvakakwana, zvakasungirwa, basa".
Osiris, Mwari anozivikanwa weEgypt, wakasviba muvara. Mune magwaro ePyramids uye bhuku revakafa, anonzi "The Great Black". Iye anobva kumaodzanyemba kweEgypt (iyo ndiyo nyaya yeharahara dzekutanga uye unified of Egypt, Farao Narmer). Mumagwaro dzakawanda muIjipiti vanamwarikadzi Isis uye Hathor uye Thot vamwari APIs, Min, Horus vanokwanisa vatema, zita rokuti "Black kukuru" rinoshandiswa vanamwarikadzi ari kwevafi magwaro madzimambo akawanda Egyptian (PepiI, PépiII, Merenre) ukuwo epithet "zvitsvuku" pakachengetwa nokuda chete zvakaipa nouMwari muEgipita pantheon kureva, Seti, wakaipa musimboti uye mhando villains iri ngano zvitsvene vaEgipita. Ganda raSeti rakatsvuka uye meso ake akajeka. Ndiye mwari weHikos, vanhu vane ganda rakanaka vanomusangana naye nemwari wevaShemitic Bhaari. Seti pakutanga aimiririrwa nembongoro ine muswe wakasimba, anofananidzwa neyoka nyoka Apophis, iro rima rinoramba richityisidzira chiedza.
Shoko rechiito rokuti "deker" rinoreva "kuva tsvuku, kuti rive rakatsvuka" asiwo "kutyisa", "kem" (rima, kuti rive rima) saka zvose zvinopinda mupfungwa yechokwadi-ruramisiro, cosmic equilibrium (c ') ndiko kuti, Maat mumutauro wechiIjipita).
Izwi rokuti "kem" (rima) rinoshandiswawo mairafu anoratidza ziso nemvere dzemaEgipita. Sezvo baba veEgyptology yemazuva ano JF Champollion vakati: "rima, rakabviswa kubva kumvere dzvudzi dzenzira yeEgipita".
Negro Marudzi uye Tsika: Kubva kuIjipita Nepot Antiquity kune Matambudziko Etsika Mazuva ano eBlack Africa
4 nyowani kubva pa15,20 €
5 yakashandiswa kubva € 13,89
Tenga 15,20 €
kubva munaGunyana 18, 2020 11:40 AM